Phupha ngekhodiyoni Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ikhodiyoni, njengemvumelwano, ikhawuleze inxulunyaniswe neengoma ezithandwayo okanye ukuzonwabisa. Kodwa oku akufuneki kube njalo. Ikhodiyani inokusetyenziselwa iikonsathi kwaye ke inikezela uluhlu olubanzi.
Kodwa kuthetha ntoni ukuphupha ikhodiyoni? Ngaba ubukhulu becala imalunga nomculo okanye isixhobo ngokwaso? Luthini ulwazi lweli phupha ngalo mqondiso?
1 Uphawu lwephupha «ikhodiyoni» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ikhodiyoni» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ikhodiyoni» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ikhodiyoni» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, "ikhodiyoni" isimboli yamaphupha ithathwa njengesixhobo esidumileyo. Ke ngoko, ubukhulu becala kufanekisela abantu abanobuhlobo. Ukuzola y Uthando lobomi. Okanye bonisa ukuphupha ukulangazelela kwakho. Kwangelo xesha, ikhodiyani iyalumkisa ephupheni ngokuchasene nokungakhathali kwaye ilumkisa abo baphuphayo ukuba bangazenzi ngokungakhathali el mundo yomlindo.
Ukuba ikhodiyoni okanye isifuba esiqinisiweyo sibonwa ephupheni njengesixhobo somculo, oku kunokuba sisalathiso Izakhono zokunxibelelana Yiba ngamaphupha. Kwihlabathi elivukayo, kulula kuye ukuba ahambe kwaye adibanise noluntu.
Ukuba ukuphupha kwenza umculo ngekhodiyoni yakho ephupheni kwabanye abantu, ufuna ukwenza imeko efanelekileyo ekuvuseni ubomi ukuze ubonise izimvo zakho kunye neengcebiso kakuhle. Oku kunokuba kwimeko efanelekileyo kunye nokulala.
Ukuba umculo wekhodiyoni yamaphupha ungaphambili, ukutolikwa oku kulandelayo kubangela ukutolikwa ngokubanzi kwephupha. Ukuphulaphula umculo wekhodiyoni ephupheni kukwangumqondiso wokuvumelana kwangaphakathi Ibhalansi Ndiyaqonda. Ukuphupha kuxhomekeke kubuntu bakho.
Ukuba iphupha lidlala ingoma eyonwabileyo kwikhodiyoni yakho ephupheni, ngokutolikwa ngokubanzi kwephupha, umzuzu wokulila okanye ixesha elibuhlungu likulindile. Ingoma yekodiyoni elusizi, kwelinye icala, izisa ixesha lokuhlala kunye nolonwabo.
Uphawu lwephupha «ikhodiyoni» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, umculo wekhodiyoni ephupheni ubukhulu becala ubhekisa kwi imeko yeemvakalelo yokuphupha.
Ukumamela umculo weharmonic ovela kwikodiyoni ephupheni ufuna ukubonisa ephupheni ukuba kungekudala uza kuba neeyure zokuzonwabisa. Ezi ziyolo ziya kukuphazamisa kwiingcinga zakho ezimnyama. Ukuba ikhodiyoni yamaphupha ivakala ngokungahambelani okanye uncuthu lwengoma luphawulwa ngamanqaku angachanekanga, oku kunokutolikwa njengophawu lokugula okuzayo okanye ubunzima kwimicimbi yothando.
Ukongeza, ngokwentetho yengqondo yephupha lokutolikwa kwesimboli yephupha «ikhodiyoni», umxholo wengoma kunye nemo yokudlala ikhodiyoni ebeka iphupha nayo kufuneka ithathelwe ingqalelo. Oku kunokukhokelela kutoliko oluninzi.
Uphawu lwephupha «ikhodiyoni» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya, ikhodiyoni njengesixhobo somculo wamaphupha ikwabonisa ukuba uphupha njani ngokomoya. Yo Ndifuna ukuveza kwihlabathi elivukayo.